Madaxa fulinta Manchester United Ed Woodward ayaa soo saaray bayaan ku saabsan suuqa kala iibsiga %
Madaxa fulinta Manchester United Ed Woodward ayaa soo saaray bayaan ku saabsan suuqa kala iibsiga
By Ramzi Yare	 On Feb 11, 2020
Saxiixayna cusub Bruno Fernandes iyo soo laabashada ciyaartoyda muhiimka ah ee dhaawaca waxa ay u fiicnaan doontaa Ole iyo kooxda madaama aan u sii gudubne qeybta labaad ee xilli ciyaareedka. Waxaan kusii nagaaneynaa tartanka Europa League iyo FA Cup, sidoo kale marka loo fiiriyo rajadayna u soo bixitaanka Champions League waa ay ficantahay, sidaas darteed weli waxaa jira wax badan.
“Si kastaba ha noqotee, koox ahaan iyo guddi ahaan, waxaan aqoonsan nahay inaanan weli meesha aan dooneynin inaan joogno. Waa muhiimadda ugu weyn ee qof walba oo kooxda ah inuu na soo celiyo oo aan si joogto ah ugu tartano horyaallada Premier League iyo Champions League. horumarka laga yaabo in had iyo jeer aanu noqon mid hagaagsan, qof kasta oo ka tirsan naadiga ayaa diiradda saaraya oo ka go’an sidii ay qaybtooda uga qaadan lahaayeen ka caawinta gaarista heerkaas.
“Shaqooyin muhiim ah ayaa durba la qabtay – maalgashina la sameeyay – si loo xoojiyo akadeemiyada, Waxaanan ku faraxsanahay horumarka laga gaaray dhacdooyinka dambe si loo hubiyo inaan haysanno ciyaartoy sax ah, kaabayaasha saxda ah, iyo dhaqanka saxda ah ee lagu joogtayn karo. guusha muddada fog.
“Sidoo kale, waxaa jiray shaqo ballaaran oo ku saabsan geeddi-socodka shaqaalaysiintayada, iyada oo maalgashi aad u ballaaran lagu sameeyay qiimeynta, xogta iyo falanqaynta. Qaybta shaqaalayntu waxay ka shaqeyneysaa qorshe cad iyo falsafad, Ole iyo shaqaalihiisa tababarenimo.
“Waxaan diirada saareynaa inaan soo qaadano ciyaaryahano isku dhaf ah kuwa khibrad leh iyo ciyaartooy da’ yarta ah ee ugu fiican ee awooda inay horumar dheeri ah sameyaan, iyagoo ka soo qalin jabiyay akadeemiyadeena sidoo kale akadeemiyada waa mid tayo sare leh.
(Qaabka shaqaaleysiintayada )
“Waxaan diiradda saaraya falanqaynta iyo xulashada ciyaartoy muddo xilli ah, iyadoo la eegayo suuqa kala iibsiga xagaaga soo socda. Qeyb ka mid ah dib-u-dhiska ayaan u aragnaa xagaaga soo socda inuu yahay fursad muhiim ah.
“Waxaan si joogto ah u qaadanay aragtidaas – maxaa yeelay Janaayo ma ahan waqti ku habboon helitaanka ciyaartoy – waxaan iibsan karnaa kaliya bisha Janaayo haddii ciyaartoy aan bartilmaameedsanay xagaagii ay diyaar noqdeen waan ku faraxsanahay in istiraatiijiyadani aan ku soo qaadane saxiixa Bruno Fernandes.
“Bruno Fernandes iyo ciyaartoydii aan keenay xagaagii hore waxay caddeyn u yihiin in hanaankayagu uu yahay midka saxda ah. Wax maalgashi malahan maalgashi ciyaartoy sanadihii la soo dhaafay, in ka badan 200 milyan ginni ayaa qarash gareeyay tan iyo markii Ole uu macalin noqday. Ujeedadeenu waa inaan hubino. in aan sii wadno helitaanka ciyaartoy tayo leh.
Ciyaartooyda Xulka Oo Loo Dalbay Qalab Casri Ah Oo “GYM”
Goormaa La Ciyaari Doono Kulankii West Ham & Man City Ee La Baajiay